အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: အတွေးအပိုင်းအစများ - ၂
အတွေးအပိုင်းအစများ - ၂
ဒီ စကားလုံးတွေကိုပဲ အဖန်ဖန် သုံးနှုန်းရင်း
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံး
ဘ၀ဟာ တစ်ချက်တစ်ချက် ၀င်္ကပါ…
...ဘ၀ဟာ တစ်ချက်တစ်ချက် နေချင်စရာ….။
စကားလုံးတွေ နှုတ်ဖျားက စီးဆင်းတိုင်း
သိသိရက်နဲ့ နှလုံးသားက ငိုကြတယ်...။
(စကားချပ်....။ အောင်ချိမ့်ရဲ့ ပုံပြောသူလေးကို နားထောင်ပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီးကို လိုက်ရှာမိတာပါ)
just only recorded :D His comment is longer than my thinking but i value it ! :P
သိပ္ပံပညာဆိုတာ မေးခွန်းက စတင်ခဲ့တာ…
သူများတွေက လေယာဉ်ပျံ ဒုံးပျံတွေ လုပ်နေခဲ့တာ သိပ်ကြာမြင်နေတာ..
ဗမာပြည်က ကက်ဆက်..ကင်မရာ …ဘောလ်ပင်တောင် မထုတ်နိုင်သေးတာ….
လူတိုင်းကို မေးခွန်းတွေ မေးပါ…
ဟိုနေ့က ကြည့်တဲ့ ဂျိန်းစ်ဘွန်းကားထဲမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံသူတွေကိုတွေ့ တယ်…
ဘာလို့ ရန်ကုန်မှာ လာပီး ဇာတ်ကားမရိုက်တာလဲ…
ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေကို ဂျိန်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားထဲမှာ မြင်တွေ့ ချင်တယ်..။
ငါကကော ဘယ်မှာလဲ..မင်းကကော ဘယ်မှာလဲ…
ငါဆိုတာ မရှိရင် ကမ္ဘာကြီးလဲ မရှိတော့ဘူးတဲ့…။